चुनावी प्रतिवद्धताको बाटो बनाउने कि मेयरज्यू ? माेहन स्याङ्तानको ब्लग – SwadeshPost
SwadeshPost > राष्ट्रिय (प्रदेश/केन्द्र) खबर > चुनावी प्रतिवद्धताको बाटो बनाउने कि मेयरज्यू ? माेहन स्याङ्तानको ब्लग
दैनिकजसोको हात्ती आतंकको बाबजुद हामी ठोरी माडीको जंगल हुदै यात्रा गर्छौ । मृत्युको जोखिम मोल्दै जान मन नहुँदा नहुँदै पनि अत्यावश्यक कामले मोटरसाइकल, साइकल वा पैदलयात्रा गदी जंगल वारपार गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ हामीलाई । हाम्रो यात्रामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचबाटोमा हात्तीसंग जम्काभेट हुँदाको दिन लाग्दथ्यो सायद त्यो दिन नै जिवनको अन्तिम दिन हो । यतिसम्म की हामी कोही अपर्झट बिरामी पर्दा सोहि बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ र कतिखेर कहाँ हात्ती, गैंडा लगायत जंगली जनावरसंग जम्काभेट हुन्छ त्यसपछि सबै भगवान माथीकै भरोसा ।
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको केही दिनअघि हात्ती र बसमा सवार यात्रुहरुको भिडियो हेर्दा मुटु सिरिंग भयो । भिडियोमा काठमाडौंबाट ठोरीतर्फ जादै गरेको यात्रुबाहक बसलाई हात्तीले बाटो छेकेको देखिन्छ । भिडियोमा हेर्दा हात्ती आक्रमण गरौं या नगरौंको दोधारको बिच घरि अघि बढेको त घरी पछि हटेको देखिन्छ । साँच्चै त्यो उन्मत्त हात्तीले आक्रमण गरिहालेको भए ठूलै अनिष्ट घटना हुने निश्चित थियो, धन्न केहि भयन । तर बिडम्बना त्यसपछिको समयमा सोहि बाटो हुँदै मोटरसाईकलमा यात्रा गर्ने क्रममा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट बाबुछोराले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्याे ।
यतिबेला मलाई बगहीँ प्याउली कुसुमखोला हुँदै बाँदरझुलाको बाटोको सम्झना आयो । त्यतिबेला ३ लाख बिनियोजित रकमबाट कुटो कोदालो गरी सररर मोटरसाइकलमा हिंँडेकै हो । अहिले मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ । उहाँ आफै पनि सो बाटोमा हिँड्नु भएकै हो । मानब बस्तीकै बिचबाट न कुनै रोकटोक न कुनै डर अझै भन्नुपर्दा दुरीको हिसाबले पनि छोटो दुरीबाट माडी ठोरीको यात्रा तय गर्न सकिने बाटो हो त्यो ।
अहिले ३ लाखले नबन्ला तर रकम केहि थप्न सकिन्छ । तत्काल रकम बिनियोजन गरेर सो बाटो पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विकासको दृष्टिले र बाँदरझुलाबासीको मनोभावना मात्र नभई हात्तीको मुखमा आँफै होमिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन सो बाटो अति उत्तम छ । माडीको बिकट क्षेत्र माडी बाँदरझुलालाई माडीसंग निकट बनाउने सो बाटो चुनाबी नारा र प्रतिबद्धता पनि हो । गएको चुनाबमा सोही नारा लियर कुसुमखोला र बाँदरझुलाको जनताको अमुल्य भोट पाएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पहलकदमीबाट बगहीँबाट कुसुमखोला हुँदै बाँदरझुला पुग्ने बाटो निर्माण सम्भव छ । तत्काल यसबारेमा पहलकदमी होस । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीको बिषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् ।
SwadeshPost November 18, 2019